Maxay yihiin shirkadaha dawooyinka waaweyn ee Hindiya? | Safarka Absolut
Warshadaha dawooyinka ee Hindiya waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka. Ku Shirkadaha dawooyinka ee India hogaamiya si wadajir ah, waa kuwa ugu badan ee adduunka ka ganacsada dawooyinka guud. Intaa waxaa dheer, waxay bixiyaan in ka badan 60% baahida adduunka ee tallaalka.
Intaas oo keliya maahan: Hindiya gudaheeda waxaa jira ku dhowaad 1.400 dhirta dawooyinka ah oo ay oggolaatay NOLOL. Waxay soo saaraan qiyaastii 60.000 noocyo caan ah oo ka kala socda 60 noocyo daaweyn oo kala duwan. Iyadoo in ka badan 3.000 oo shirkado dawooyin ah ay shaqeynayaan iyo shabakad adag oo ka badan 10.500 shaybaarro wax soo saar, waxaa si ammaan ah loo oran karaa Hindiya waa farmasiga weyn ee meeraha ku yaal.
Warshadaha dawooyinka ee Hindiya Waxaa lagu qiimeeyay 2019 $ US $ 36.000. Daawooyinka guud, oo leh saamiga suuqa 71%, ayaa ah qaybta ugu weyn ee wax soo saarkeeda.
Waa kuwan liiska shirkadaha dawooyinka ee horseedka ka ah Hindiya. 10-ka ugu sarreeya:
1 Daryeelka Caafimaadka ee Cadila
2 Pharma Torrent
4 Dr. Reddys Shaybaarada
7 Qorraxda Pharma
Daryeelka Caafimaadka ee Cadila
Waa shirkadda ugu weyn dawooyinka ee Hindiya. Waxaa la aasaasay 1952 by Ramanbhai Patel wuxuuna kuyaala Axmedabad. waxayna noqotay shirkada dawooyinka ugu weyn India.
Cadila Healthcare waxay leedahay toban warshadood oo waxsoosaarka wadanka oo dhan meelo kaladuwan oo wadanka ah: Navi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa iyo Patalganga.
Waxay sidoo kale xarun ku leedahay Axmedabad iyo warshado wax soo saar oo ku kala yaal qaybaha kala duwan ee dalka. Pharma Torrent wuxuu ku takhasusay soo saarista daawooyinka loogu talagalay daaweynta caafimaadka ee habka dhexe ee neerfaha (CNS), xanuunada caloosha, xanuun joojiyaha iyo antibiyootigyada.
Iyada oo koror layaab leh ay yeelatay tobanaankii sano ee la soo dhaafay, CIPLA, oo laga aasaasay magaalada Mumbai sanadkii 1935, ayaa noqotay mid ka mid ah shirkadaha dawooyinka ugu faa'iidada badan India.
Shirkaddu way horumaraysaa daawooyinka lagu daaweeyo cudurrada kala duwan sida niyad-jabka, sonkorowga, ama cudurrada neef-mareenka. Wadarta guud ee iibkeedu waa qiyaastii 7.000 milyan rupees sanadkii (qiyaastii 78 milyan oo euro). Waxay leedahay toddobo xarumood oo wax soo saar oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 22.000 oo shaqaale ah.
Dr. Reddys Shaybaarada
Shaki la'aan waa mid ka mid ah shirkadaha dawooyinka waaweyn ee Hindiya, oo leh saadaalin caalami ah oo caan ah. Shirkadda waxaa la aasaasay 1984-kii Dr Anji Reddy. Waxay xarunteedu tahay magaalada Hyderabad waxayna soo saartaa in ka badan 180 dawo iyo sidoo kale in ka badan 50 maaddooyinka dawooyinka firfircoon.
Waxaa jira toddoba warshadood oo ah Dr. Reddys Labs oo waxsoosaarka Hindiya ah. Dalka dibadiisa, shirkadu waxay sheybaarro ku leedahay Ruushka waxayna ku qaybisaa daawooyinka shirkadda dawooyinka ee Beljamka ee UCB SA Koonfurta Aasiya.
Tirada iibkeedu waa in ka badan 5.000 milyan rupees sanadkii. Lupine wuxuu dhashay 1968 mahadcelinteeda Desh Bandhu Gupta, mid ka mid ah cilmi baarayaasha ugu caansan dalka. Shirkadda ayaa hadda wax-soo-saarkiisa u iibgeysa in ka badan 70 dal oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Koonfur Afrika, Japan, Australia iyo Midowga Yurub.
Shirkadaha Dawooyinka ee ugu sareeya Hindiya
Waxaa la aasaasay 1988, Aurobindo Pharma Xaddidan waxay wax ka qabataa soo saarista iyo soo saarista daawooyinka guud iyo waxyaabaha firfircoon. Wuxuu ku takhasusay lix goobood oo daaweyn gaar ah leh: Nidaamka neerfaha ee dhexe, wadnaha iyo xididada, antibiyootigyada, antiretroviral, antiallergic iyo gastroenterological products.
Shirkaddu waxay u dhoofisaa wax soo saarkeeda in ka badan 120 dal, waxayna lee dahay in ka badan 4.000 bilyan Rs sanadkii.
Mid kale oo ka mid ah shirkadaha dawooyinka waaweyn ee Idnia, oo ay aasaaseen Dilip shanghvi sanadkii 1983 deegaanka Vapi ee Gujarat. Markii hore Sun Pharma waxay u heellanayd soo saarista shan nooc oo daroogo ah oo si gaar ah ugu jihaysan daaweynta cudurada maskaxda. Markii dambe, shirkaddu waxay heshay daawada Ranbaxy, kordhinta caasimadeeda iyo balaarinta wax soo saarkiisa.
70% dawooyinka Sun Pharmaceutical ayaa lagu iibiyaa Mareykanka. Sanadihii la soo dhaafay shirkaddu waxay bilowday ballaarin xoog leh oo u horseedday inay dhir ka furto dalal ay ka mid yihiin Mexico, Israel ama Brazil.
Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd. waxaa loo aqoonsan yahay a shirkadda adduunka oo dhan hogaamisa soo saarista iyo suuqgeynta daroogooyinka kala duwan. Sharafta shirkadan dawada waxay kujirtaa heerka aadka u sareeya ee kooxdeeda khubaro ah, tas-hiilaadkeeda casriga ah iyo maalgashiga mashaariicda cilmi baarista cusub.
Waxay ku saleysan tahay Bombay, Sheybaarada Alkem waa mid ka mid ah shirkadaha dawooyinka horseedka ka ah Hindiya. Wax soo saarkiisa waxaa lagu iibiyaa in ka badan 40 dal- Daawooyinka guud ee tayada sare leh, maaddooyinka dawooyinka firfircoon iyo nafaqada. Guud ahaan, in ka badan 800 magac oo daboolaya dhammaan qaybaha daweynta.
Suuqyada Alkem waxay ku iibisaa alaabada Mareykanka gudihiisa sumadda ganacsiga Ascend. Sidoo kale, waxay horumarisaa waxqabadkeeda suuqyada kale sida Australia, Chile, Filibiin iyo Kazakhstan, iyo kuwo kale.
Liiskayagu wuxuu ku soo gabagabeynayaa IPCA Laboratories Ltd., shirkad leh in ka badan lix sano oo khibrad ah. Wax soo saarkiisa waxaa loo qaybiyaa ilaa 120 wadan, halka xarumaheeda ay amaan ka heleen maamulada ugu waaweyn ee xakameeya dawooyinka aduunka oo dhan.
Mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan ee IPCA waa in la ilaaliyo tayada sare ee dhammaan alaabteeda, iyada oo lagu sharraxayo takhasus gaar ah ee daaweynta caafimaad qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxay yihiin shirkadaha dawooyinka waaweyn ee Hindiya?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado magacyada shaybaarada ku yaal Hindiya, oo ay caddeeyeen DIGEMID-ka Peru
Jawaab Raju Mahtani
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado liiska sheybaarada si aan u ogaado waxa ay hayaan iyo inaan awoodo inaan la shaqeeyo, waxaan leenahay Aqal Matalaad Venezuela, Kolombiya iyo Bartamaha Ameerika
Jawaab ELIAS TAHAN
Shimbiraha kaymaha Amazon